Dowladda Soomaaliya Oo Ka Jawaabtay Go’aanka Kenya Ay Ku Xidhayso Xeryaha Qaxootiga | Gaaroodi News
Dowladda Soomaaliya Oo Ka Jawaabtay Go’aanka Kenya Ay Ku Xidhayso Xeryaha Qaxootiga
March 27, 2021 | Published by: Tifaaftiraha
Madaxweyne Farmaajo (bidix) iyo madaxweyne Kenyatta
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay fajaciso ku noqotay go’aankii ay dhawaan dowladda Kenya wakhtiga kooban ugu qabatay hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ee ahaa in gebi ahaanba la xiro xeryahaya qaxootiga ee Dhadhaab iyo Kaakuma oo tobaannaan kun oo Soomaali ah ay ku nool yihiin.
Wasiirka Warfaafinta ee Soomaaliya, Cismaan Abokor Dubbe, oo BBC-da u warramay ayaa sheegay in dowladda Kenya ay isku khaldayso arrimaha siyaasadda iyo kuwa bini’aadanimada, isagoo intaa ku daray in dadka qaxootiga ah ay ku joogaan Kenya sharci caalami ah oo mudan in la ilaaliyo.
“Arrimaha siyaasadda waxay ka dhaxeeyaan labada dal, kiis baa maxkamadda yaalla oo weli go’aan laga gaarin, arrimhii Jabhadaha baan hadda xalkoodii helnay,Marka haddii lagaaga adkaaday siyaasadda ma ahan inaad ka aar-goosato dadka qaxootiga ah.”
“Qaxootiga waxa uu ku fadhiyaa xeerka caalimaga ah ee qaxootiga ee loo yaqaan Geneva Convention marka sidaasi darteed Kenya xaq uma lahan inay si khasab ah ku celiso qaxootiga.”
Wasiir Dubbe ayaa sheegay in Kenya aysan dan ugu jirin dib u celinta qaxootiga oo iyada ayaaba ku qaadata malaayin lacag ah.
Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya, Cismaan Abuukar Dubbe
“Kenya iyada ayaa faa’iidada ugu badan ka hesha qaxootiga, sannadkiiba waxaa ka soo gala qiyaas ahaan nus bilyan doolar iyadaaba dhaqaale ku qabta marka u maleyn maayo inay dan badan ugu jirto dib u celinta qaxootiga.”
“Waxaan hadda wadnaa dib u xoreynta dalka oo gobolladii muhiimka ahaa sida gobolka Jubbada dhexe oo ay dadka qaxootiga qaarkood ka yimaadeen waxaa haysta Al-shabaab marka waxaan is leeyahay in hadda la siyaasadeeyo arrimaha qaxootiga ee cadowga soo barakiciyay dhulkoodii in aanay dani ugu jirin darisnimada iyo nabad ku wada noolaanshaha bariga Afrika.”
Wasiir Dubbe oo ay BBC-da weydisay maadaamaa uu sheegay inaan la siyaasadaynin arrimaha qaxootiga in Soomaaliya xitaa ay horay u qaadday tallaabooyin la xiriira ganacsiga sida joojinta qaadka ayaa sheegay in qaadka loo joojiyay ka hortagga fayraska coorna awggii.
Soomaaliya ay xayirtay ganacsigii qaadka ee ay Kenya u dhoofin jirtay Soomaaliya, kaasoo xukuumadda Nairobi uu uga soo xaroon jiray dhaqaale xoog leh inkastoo markii dambe dib loo furay.
Suuqa ugu weyn ee jaadka Kenya ayaa ah Soomaaliya
Dowladda Soomaaliya ayaa 15-kii bishii December ee sanadkii tagay xiriirkii diblomaasiyadeed u jartay Kenya kaddib markii ay sheegtay in ay ku xad gudubtay madaxbannaanideeda, ayna ciidamo kasoo abaabushay xadka ay la wadaagto.
Kenya ayaa 14 maalmood u qabatay ha’yadda Qaramada Midoobey u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee UNHCR si ay ula timaaddo qorshe lagu xirayo xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab iyo Kaakuma, sida lagu shaaciyay qoraal lasoo dhigay barta Facebook ee wasaaradda arrimaha gudaha.
Kenya waxay sidoo kale sheegtay in qorshaha xiritaanka xeryahan aanan wax wadahadal oo kale laga yeelan doonin.
Hase yeeshee hadalka dowladda Kenya Ka dib waxay Ha’yadda Qaramada Midoobey u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee UNHCR sheegtay in Kenya ay ha’yadda ku wargelisay qorshaha ay ku dooneyso inay ku xirto xeryaha Dhadhaab iyo Kaakuma muddo gaaban gudahood.
UNHCR waxay sheegtay in go’aankan uu saameyn ku yeelan doono dadka qaxootiga ah ee ku nool Kenya xilli uu dunida saameeyay safmarka Karoona.
Waxay intaas ku dartay inay sii wadi doonto wadahadallada ay arrintan kala yeelaneyso mas’uuliyiinta Kenya.
“UNHCR waxay taageero la garab taagan tahay dowladda Kenya gaar ahaa in lasii xoojiyo howlaha socday si xal loo gaaro isla markaana la qaddariyo dadka qaxootiga ah” ayaa lagu yiri bayaan kasoo baxay UNHCR.
Labada waddan ayaa sannadihii lasoo dhaafay uusan xiriir wanaagsan ka dhaxeynin tan iyo markii ay horaantii 2019-kii cirka isku shareertay xiisadda ku saabsan muranka xadka badda ee Soomaaliya iyo Kenya